Maraykanku wuxuu joojinayaa fiisada dacwad oogaha Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ah - TELES RELAY
ACCUEIL » International »Mareykanka oo burinaysa fiisada dacwad oogaha Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada
Maraykanku wuxuu joojinayaa fiisada dacwad oogaha Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada
Dawladda Maraykanku waxay doonaysaa inay ka hortagto baadhitaan kasta oo ICC ah oo lagu soo oogay denbiyo dagaal oo lagu soo oogay khilaafka Afqaanistaan, oo ay ku jiraan ciidamada Militeriga Maraykanka.
Dunida oo leh AFP Ku soo dhuftay shalay magaalada 11h43
Waqtiga Akhrinta 1 min.
Xeer-sare ee ICC, Fatou Bensouda, ayaa shir jaraa'id oo uu ku Kinshasa (DRC) on May 3 2018. JOHN WESSELS / AFP
Mareykanka ayaa burin fiisada ee xeer-sare ee Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada (ICC), Fatou Bensouda, ay sabab u tahay baaritaan suurto galka ah ee xadgudubyada askarta Maraykanka ee Afganistan. "Waxaan xaqiijin karnaa in xukuumadda Mareykanku ay dib u dhigtay fiisada dal-kugalka Mareykanka ee kufsiga.", ayaa lagu soo warramey Jimcihii 5 April, xafiiska Mme Bensouda war qoraal ah.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee ICC, oo ah muwaadin Gambia ah, ayaa sidookale sii wadi doona waajibaadkiisa "Cabsi la'aan ama nacayb" inkastoo dib loo celiyay fiisada, ayaa lagu yiri hadalka, isaga oo xusay in Mme Bensouda waxay lahayd a "Xilka Madax-banaan oo aan dhexdhexaad ahayn".
ICC, oo Washington ka tirsan tahay, waa maxkamad caalami ah oo fadhigeedu yahay The Hague (Nederland) si ay u tijaabiso dambiyada dagaal iyo dembiyada ka dhanka ah aadanaha. Fatou Bensouda ayaa ku dhawaaqday 2017 inay u socoto inay garsoorayaasha weydiisato ogolaansho si ay u furto baaritaan lagu sameeyo dambiyada dagaal ee lagu soo oogay macnaha argagixisanimada Afqaanistaan, oo ay ku jiraan ciidamada milatariga Maraykanka.
Bishii hore, Mareykanka ayaa ku dhawaaqay xayiraadda fiisada in ay isku daydo in ay ka hortagto baadhitaan kasta oo Maraykanku ka dhan yahay shaqaalaha milatari ee Mareykanka ee ka shaqeeya Afgaanistaan.
Sidoo kale akhri Mareykanka, Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada waa "sharci daro" iyo "horay u dhintay"
1 aher Bishii Abriil, madaxweynaha ICC, Chile Eboe-Osuji, ayaa ugu baaqay Maraykanka in ay taageeraan Maxkamadda iyo in ay u hoggaansamaan heshiiskeeda aasaasiga ah, Sharciga Rome. Mr. Eboe-Osuji wuxuu ku booriyay Mareykanka "Inuu ku biiro asxaabtiisa iyo asxaabtiisa ku dhow Jadwalka Sharciga Rome" iyo inay taageeraan Maxkamadda "Yaa qiimaha iyo himiladu si buuxda ugu habboon yihiin dareenka ugu wanaagsan ee Mareykanka iyo qiyamka".
ICC waxaa xukuma Heshiiska Rome, heshiis ayaa lagu galey 1er July 2002 oo la ansaxiyay tan iyo markii uu dalka 123. Xeer-ilaaliyihiisu wuxuu bilaabi karaa baaritaankiisa isaga oo aan ogolaansho ka helin garsoorayaasha, haddii ay ku lug leeyihiin ugu yaraan hal waddan oo xubin ka ah. Tani waa xaaladda Afgaanistaan.
Xidhiidhka ka dhexeeya Washington iyo maxkamaduhu marwalba ma ahan kuwo aan buuq lahayn. Maraykanka ayaa diiday inuu ku biiro iyo wax kasta, oo ay ku jiraan iyada oo loo marayo heshiis laba geesood ah oo leh dalal badan si loo hubiyo in Maraykanka la bartilmaameedsan karaa by baaritaan. Maamulka Donald Trump ayaa ku adkeeyay kalsooni la'aanta ICC-da si aad ah.
Sidoo kale akhri Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada: hanjabaado soo noqnoqday
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/05/les-etats-unis-revoquent-le-visa-de-la-procureure-de-la-cour-penale-internationale_5446180_3210.html?xtmc=etats_unis&xtcr=2
India: Laba argagixiso oo Xisbul Islaam ah ayaa lagu dilay intii lagu jiray shirkii dukaanka | India News
Switzerland: Switzerland ayaa si toos ah u soconeysa semi-finalka